Brexit, Boeing 737 MAX limbo inoisa mazana emabasa eRyanair panjodzi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Brexit, Boeing 737 MAX limbo inoisa mazana emabasa eRyanair panjodzi
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Ireland Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mutakuri webhajeti yeIrish Ryanair yakapa chiziviso chinokatyamadza kuti inofungidzira kusvika ku1,500, 500 redundancies pakati pevashandi vayo. Ivo ndivo vatyairi mazana mashanu, vangangoita mazana mana evashandi vekufamba nendege, pamwe nemazana matanhatu pasi pezvaitarisirwa nzvimbo munzvimbo dzekuhaya dzevashandi vekabhini
Izvi zvakataurwa naBloomberg uyo akaona vhidhiyo meseji kuburikidza naiye CEO Michael O'Leary akapa nhau kuvashandi. Iyi sarudzo yanga yakabatana nekudonha kwemibairo, kunonoka muzvirongwa zvekuwedzera nekuda kwevhu reBoing 737 Max ndege, uye kusava nechokwadi kweBrexit mhedzisiro.
Kubviswa mabasa kunofanirwa kusarudzwa kupera kwaNyamavhuvhu, mushure mekukurukurirana nenhandare dzendege pamwe nemubatanidzwa wezana 86 mabheseni eEuropean yendege yakaderera mutengo.
Kucheka kwacho kuchazotanga pakati paGunyana naGumiguru uye kunogara kusvika Krisimasi yapera.
«Izhizha rakabatikana uye isu tichafanirwa kutarisana nenguva yakaoma kwazvo yechando. Mumasvondo maviri anotevera, tichaedza nepatinogona napo kudzikisa kurasikirwa kwevanhu, asi vamwe padanho iri hazvidziviriki, "akadaro Michael O'Leary, achizivisa zvingangove zvakatemwa vashandi vekambani, neinenge gumi muzana yazvino 10 vatyairi vari panjodzi.
Panguva ino, mukana wekurasikirwa nebasa ravo unogona kutungamira vashandi ve nhandare kumhirizhonga yevashandi uye ratidziro dzinogona kukonzera kusagadzikana kune vafambi pakukwirira kwezhizha.